Newsletter AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and ArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HBotswanaBouvet IslanBrazilBritish IndiBrunei DarusBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslanCentral AfriChadChileChinaChristmas IsCocos (KeeliColombiaComorosCongoCongo, the DCook IslandsCosta RicaCote D'IvoirCroatiaCubaCyprusCzech RepublDenmarkDjiboutiDominicaDominican ReEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslFaroe IslandFijiFinlandFranceFrench GuianFrench PolynFrench SouthGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissaGuyanaHaitiHeard IslandHoly See (VaHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, IslamiIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, DemocKorea, RepubKuwaitKyrgyzstanLao People'sLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab LiechtensteiLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, tMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Moldova, RepMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands New CaledoniNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslaNorthern MarNorwayOmanPakistanPalauPalestinian PanamaPapua New GuParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FedeRwandaSaint HelenaSaint Kitts Saint LuciaSaint PierreSaint VincenSamoaSan MarinoSao Tome andSaudi ArabiaSenegalSerbia and MSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslaSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard andSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab Taiwan, ProvTajikistanTanzania, UnThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad andTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and CaTuvaluUgandaUkraineUnited Arab United KingdUnited StateUnited StateUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin IslanVirgin IslanWallis and FWestern SahaYemenZambiaZimbabwe	Current Stats 9 visitors online
Total visits: 416313
Wargelin: - KU SOO DHAWOOW RADIO HORMUUD XARUNTA WARARKA SUGAN SIFEEYAHA XAQIIQDA. - - - Hormuud News Friday, May 24th, 2013 | 00:23
[Friday, August 17th, 12] :: Nus baa diiddan fasaxa muslimiinta
Denmark: Bilawga wiigga danbe kumanaan muslimiin ah ayaa u xafladaynaya ciidda Ramadaan, iyagoo soo soomanaa bishaas oo dhan. Sidaas awgeed dugsiyada dalka ayaa fasax siinaya carruurta muslimiinta maalin ama laba, si ay u la ciidaan qoysaskooda. Laakiin deenish badan ayaa ka soo horjeeda fasaxaas, siday muujisay ra'yiururin cusub.
Dugsi loo xidhayo fasaxa muslimiinta awgii
Iyadoo waalidka qaarkood doorteen inay carruurtooda ku hayaan guriga, ayay arrintaasi saamaysay dugsiga Blågård Skole ee Kobanheegan, oo la fasaxayo ardayda oo dhan maalinta isniinta. Tiro ka badan boqolkiiba 60 ardayda dugsiga ayaa muslimiin ah, oo ka qaybgelaya ciidda muslimiinta. - Waxa aannu rabnaa dugsi ay wada leeyihiin dhammaan ardayda Blågård Skole, waxa aan filayaa, inaanu taas hirgelin doonno, ayay tidhi guddoomiyaha dugsiga Blågård Skole, Pia Madsen.
Shaqaalaha ayaa taageeray goaanka hoggaanka, oo kala kulmay jawaab togan dhinaca waalidkana.
- Waxa aynnu nahay bulsho leh dhaqammo badan, oo ay tahay in aynnu baranno sidaynnu isu ixtiraami lahayn. Waalidka ayaa dareensan, in loo aqoonsaday dhaqankoodii. Waxay dareemayaan, in aannu aragno oo maqalnay iyaga iyo carruurtoodaba, ayay tidhi lataliyaha dugsiga iyo guriga, Nanna Butters.
Labadiiba mid ayaa ka soo horjeeda fasaxa muslimiinta
Laakiin shaqada dugsigu maaha, inay tixgeliyaan munaasabadaha sida ciidda oo kale ah, ayay yidhaahdeen xisbiga dadwaynaha deenishka, oo ka soo horjeeda in carruurta muslimiinta laga fasaxo dugsiyada dhammaadka bisha Ramadaan.
- Dugsiga hoose/dhexe waxa ku waajib ah dhaqanka deenishka, laakiin kuma waajib aha dhaqanka iyo diinta muslimiintu. Dadku way u dabbaaldegi karaan ciidda, laakiin waa inay noqoto xilli ka baxsan waqtiga dugsiga, ayuu yidhi afhayeenka arrimaha qalabixinta ee xisbiga DF, Martin Henriksen.
Fikraddaas waxa qaba labadii qof ee deenish ahba mid, siday muujisay ra'yiururin Epinion u samaysay DR Nyheder. Boqolkiiba 50 ayaa ku jawaabay, inay ka soo horjeedaan in carruurta muslimiinta laga fasaxo dugsiyada ciidda, laakiin boqolkiibaa 20 ayaa taageeray in la fasaxo.
Radikaalka: Ardayda ayaa goaanka leh
Laakiin xisbiga dawladda ku jira ee Radikaalka ayaan waxba ka qabin, in dugsiyadu fasaxaan carruurta muslimiinta.
- Waxaan qabaa, inay muhiim tahay, in dugsiga hoose/dhexe laga maamuuso dhaqammada kala duwan. Iyo inuu qofku heli karo maalin fasax ah, ayay tidhi afhayeenka arrimaha carruurta iyo waxbarashada, Lotte Rod.
Ma qabto, inay shaqada siyaasiyiinta tahay, inay farogeliyaan qaabka ay dugsiyadu u maareeyaan fasaxyada iyo munaasabadaha.
- Waa muhiim, in dugsiyadu u madaxbannaanaadaan munaasabadaha waalidka iyo ardayda dugsiga, ayay tidhi afhayeenka arrimah carruurta iyo waxbarashada, Lotte Rod. source. dr.dk
posted on Friday, August 17th, 12